पोर्चुगलमा सडकमै सुत्छन् नेपाली – Dcnepal
श्रीलंकाका क्रिकेट खेलाडीहरु खेल मिलेमतो प्रकरणमा, आईसीसीद्धारा छानबिन सुरु
एथेन्सस्थित अमेरिकी दूतावासमा पेट्रोल बम प्रहार
लकडाउनको मौका छोपी भारत लैजान लुकाइ राखेको करीब २ क्विन्टल गाँजा बरामद
भारतका रक्षा सचिव कोरोना संक्रमित भएपछि साउथ ब्लकमा खैलाबैला
प्रकाशित : २०७६ मंसिर १० गते १३:३३
लिस्वन। नेपालबाट युरोप छिर्ने सपना धेरै नेपालीमा छ। जीवनलाई सफल बनाउन भन्दै युरोप छिर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ। त्यसमा पनि युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा आउने नेपालीको सङ्ख्या दैनिकजसो बढेको बढ्यै छ। उनीहरु सहजै रुपमा पाइने आवासीय अनुमति पत्र, नागरिकता र युरोपियन पासपोर्ट (रातो पासपोर्ट) का कारण पोर्चुगल आउने गर्दछन्।
One thought on “पोर्चुगलमा सडकमै सुत्छन् नेपाली”
हामी नेपाली says:
तिमी पत्रकारै हौ? पत्रकारिता के हो थाहा छ तिमीलाई ? सोचेर,बुझेर , सत्य तथ्य को खोज गरेर, श्रोत खुलाएर समाचार प्रस्तुत गर्ने गर्नुहोला!
सडकमा सुत्ने को समाचार त हाल्नुभो! खोज गर्नुहोस करोडपति भाका मान्छे नी छन् पोर्तुगल आएर त्यो नी छाप्ने गरौं ! हावा मा कुरा नबुझी एउटा व्यक्ति लाई लिएर पुरै नेपाली समुदायलाई नै ठेस पुग्ने गरी तपाईंको काल्पनिक समाचार हरु सम्पादन नगर्नुहोस् । Blame the person not the society.